Fito no maty tao anaty korontana tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul satria nofoanana ny sidina ara-barotra rehetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Fito no maty tao anaty korontana tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul satria nofoanana ny sidina ara-barotra rehetra
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fito no maty tao anaty korontana tao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul, satria nofoanana ny sidina ara-barotra rehetra
Ny sasany tamin'ireo olona novonoina dia nifikitra tamin'ny fiaramanidina fitaterana miaramila amerikana rehefa niainga izy io, saingy nianjera tamin'ny fahafatesany taoriana kelin'ny niaingany.
Manelingelina ny famindra-miaramila ny sivily afrikanina very fanantenana.
Ny sasany tamin'ireo olona maty dia nifikitra tamin'ny fiaramanidina fitaterana miaramila amerikana rehefa niainga izy io.
Ny tafika amerikana dia nitolona mba hitazomana ny vahoaka nandritra ny alina, ary ny tatitra dia nipoaka ny poa-basy sy ny fipoahana.
Sivily afghana miisa fito no namoy ny ainy tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Kabul, anisan'izany ny olona sasany nianjera tamin'ny fiaramanidina fitaterana amerikana niainga, ary ny sidina rehetra nivoaka ny renivohitra afgana dia notapahan'ny vahoaka teny amin'ny làlambe, hoy ny tatitra nataon'ny tompon'andraikitra amerikana tao Kabul.
Nandritra ny alahady alina dia nitondra ny miaramila amerikana hiarovana ny famindran-toerana ireo diplaomaty amerikana ary niady mafy ireo mpiasa mba hitazomana ireo vahoaka Afghana very fanantenana tsy ho eny ivelan'ny lalamby ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Hamul Karzai ao Kabul, izay hany hany lalan-kely eo anelanelan'ny fehezin'ny Taliban Afghanistan sy ny any ivelany.
Ny sasany tamin'ireo olona maty dia nifikitra tamin'ny fiaramanidina fitaterana miaramila amerikana rehefa niainga izy io, saingy nianjera tamin'ny fahafatesany taoriana kelin'ny nialana tamin'ny fahafatesany.
Ny sidina ara-barotra avy any Kabul dia naato tamin'ny alahady, saingy olona afgana namoy ny ainy no nifanena tamin'ny lalambe tokana misy ny seranam-piaramanidina, na teo aza ny ezaka farany natao hisamborana ny renivohitra Afghan.
Ny miaramila amerikana dia nitolona mafy mba hitazomana ny vahoaka nandritra ny alina, ary ny tatitra dia nipoaka ny poa-basy sy ny fipoahana.